November 2021 – हाम्रो देश
१ माघ २०७८, शनिवार Saturday, 15 January, 2022
Posted on 30/11/2021 by hamro des
१४ मंसिर, काठमाडौं । डोल्पामा धर्म परिवर्तन गराएको अभियोगमा अदालतले एक जनालाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश केशवराज चपाईंको इजलासले पाश्चर केशवराज आचार्यले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–२ का महिलालाई जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराएको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । गत
Posted on 30/11/2021 by हाम्रोदेश
काठमाण्डाै – नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी हुनुभएको छ । चितवनको सौराहामा भएको मतगणनाको परिणामअनुसार अध्यक्षमा ओलीले एक हजार आठ सय ४० मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने रावलले दुई सय २३ मत ल्याउनुभएको हो । अध्यक्षमा ओलीलाई सर्वसम्मत गराउने निकै प्रयास भए पनि भीम रावलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि चुनाव भएको थियो । चुनावमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा देउवा पक्षकै ६ जना आकांक्षी, को बलियो?
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिका लागि ६ जना आकांक्षीले उम्मेदवारी घोषणा गरेर मत मागिरहेका छन्। सहमति नभएर निर्वाचनमा गए मंसिर १६ गते उनीहरूले मनोनयन दर्ता गर्ने तालिका छ। यसअघि आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधि ल्याउन प्रदेश सभापतिका आकांक्षी ६ जना नै कसरतमा छन्। कैलालीबाट बहालवाला जिल्ला सभापति नरनारायण शाह ‘मनु’ र हिमबहादुर रावलले उम्मेदवारी
केपी ओलीको राजनीतिक यात्रा
Posted on 30/11/2021 (30/11/2021) by हाम्रोदेश
काठमाडौं – नेकपा एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशानबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक विजयी भएका छन्। उनले प्रतिद्वन्द्वी भीम रावललाई भारी मतले पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी एमालेमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि नवौं महाधिवेशनमा माधव कुमार नेपाललाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। विसं २०२२ सालमा कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका
मैले जति मत पाएको छु, त्यो मेरो र पार्टीकाे ठूलो सफलता हो : डा रावल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दशौँ महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी डा भीमबहादुर रावलले आफूले पाएको मत आफ्नाे र पार्टीको ठूलो सफलता भएको बताउनुभएको छ । आधिकारिक घोषणा नभएपनि मत परिणाम अनुसार अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी हुनुभएको जानकारी बाहिर आएलगत्तै डा रावलले जनतासमाचारसँगको कुराकानीमा आफूले पाएको मत पार्टी र आफ्नो ठूलो सफलता भएको बताउनुभएको
नेकपा एमालेको चितवनमा जारी १०औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको भएको निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ। पदाधिकारीमध्ये सचिव पदमा गोकर्ण विष्ट सबैभन्दा अगाडि छन्। केपी ओलीको सर्वसम्मत सूचीविरूद्ध सचिवमा उम्मेद्वारी दिएका भीम प्रसाद आचार्यले १३०० मत पाउँदा टंकप्रसाद कार्कीले ५०० मत पाएका छन्। यसअघि उपाध्यक्ष पदमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले सर्वाधिक मत पाएर विजयी भएकी छन्। उनले
काठमाडौं। क्यारेबियन देश बारबाडोसमा आज बेलायती महारानी एलिजाबेथलाई राष्ट्रप्रमुखबाट हटाएर गणतन्त्रको घोषणा गरिँदैछ । स्थानीय समयअनुसार आज सोमबार राती बारबाडोस गणतन्त्र घोषणा हुनेछ । आज बेलायती राजकुमार चार्ल्सले बारबाडोसमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नी आमाले बारबाडोसलाई उसको सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गरेको सन्देश पढेर सुनाउनेछन् । यससँगै बारबाडोस संसारको कान्छो गणराज्य बन्नेछ । आफ्ना समुद्री तटहरु र क्रिकेटप्रतिको
मुलुक चुनावतर्फ गइसक्योः प्रचण्ड
बुटवल– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक चुनावतर्फ गएको बताएका छन्। बुटवलमा माओवादी नेता स्व. रामप्रसाद बञ्जाडेको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै उनले दलहरू महाधिवेशनमा गएको र ती महाधिवेशनले चुनावी तयारी गर्न थालिसकेको बताए। ‘मुलुक चुनावतिर गइसकेको संकेत दलका महाधिवेशनहरूका गतिविधिले गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘चुनावलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन दलहरूबीच आपसी समझदारी र सहकार्य
सचिवमा भीमप्रसाद आचार्य र टंकप्रसाद कार्की पराजित
काठमाडौं: नेकपा एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ७ जना सचिव निर्वाचित भएका छन्। केपी ओलीले प्रस्ताव गरेका गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, पद्मा कुमारी अर्याल, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ र लेखराज भट्ट निर्वाचित भएका हुन्। ओलीको प्रस्तावमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै भीम प्रसाद आचार्य र टंकप्रसाद कार्कीले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरु पराजित भएका छन्।
विदेशबाट फर्किनेहरूले ल्याएको बाला आकारको सुन विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीले बरामद गरेका छन् । सोमबार खाडी मुलुकबाट फर्किनेहरूले बालाको स्वरूप बनाएर ल्याएका २१ किलो सुन भन्सार कर्मचारीले बरामद गरेका हुन् । काँचो सुनलाई बाला आकारमा बनाएर ल्याएको हुनाले ४ सय १५ जनाको साथबाट २१ किलो सुन बरामद गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक